Edemede Mark Emond na Martech Zone |
Edemede site na Mark Emond
As Ịchọ SpringOnye guzobere na Onye isi ala, Mark nwere nnukwu agụụ maka inyere ndị isi ahịa aka ịgbanwe usoro azụmaahịa ha na -enweta ego, na -enyere ha aka ịbụ ndị isi nhazi na nzukọ ha. Mark nwere mmasị inye ndụmọdụ ma kuziere ndị ahịa otu esi etolite usoro dị elu, mana dị mma, ahịa ịre ahịa ego ma mee ka ha nwee usoro teknụzụ azụmaahịa jikọtara ọnụ iji nyefee njikọ aka nke ọtụtụ ọwa.
Nlaghachi na itinye ego (ROI) nke Platform Platform Automation
Na Tọzdee, Septemba 28, 2021 Na Tọzdee, Septemba 28, 2021 Mark Emond
N'afọ na -esote, Automation Marketing na -atụgharị 30! Ee, ị gụrụ nke ọma. Ọ bụ ezie na ọ dị ka teknụzụ a nke juru ebe niile ugbu a ka na -eto eto ka nwere pimples, nke bụ eziokwu bụ na ikpo okwu akpaaka ahịa (MAP) alụọla di, nwee nwa nkịta, ọ nwekwara ike ịmalite ezinụlọ n'oge adịghị anya. N'ime mkpesa nyocha ọhụrụ Demand Spring, anyị nyochara steeti ahịa teknụzụ akpaaka taa. Anyị chọpụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ụlọ ọrụ ka na -agba mgba n'ezie